मलाई मन परेको फोटो | गणेश कार्कीको ब्लग
यीनलाई बाँदर किन नभन्ने ?
Posted on April 15, 2011 by नेपाली मुटु
खासमा मलाई यो फोटो यहाँ राख्न मन नै थिएन । आफ्नो देशका नेतालाई अर्को देशको कसैले बाँदर बनाएर नचाएको कसलाई राम्रो लाग्छ र, यो ब्लगमा राख्नु ? तर राख्नै पर्यो । कारण यस्तो छ त्यै भएर पो राखेको त
अरुलाई गर्न पनि नदिने अनि आफु पनि गरि नहाल्ने यीनको बानी ठ्याक्कै मिलेकाले ।
कहिले नमिल्ने ।
कसैको अर्ति उपदेश नसुन्ने ।
खाली केहि दिइहाल्छ कि भनि दिल्ली तिर हेरेर बस्ने ।
यति बानी मिलिसके पछि यीनलाई किन बाँदर नभन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नआएर यो फोटो मैले यहाँ राखेको हुँ ।
अरु पनि कारण छन् भने लेख्नु होस् ।
Filed under: नोट अफ डिसेन्ट, मलाई मन परेको फोटो |	2 Comments »
प्रकृतिको लिला अपराम्पार
Posted on March 21, 2011 by नेपाली मुटु
झट्ट हेर्दा कतै नौनीको डल्लो पो हो कि जस्तो । कति सुन्दर । प्रकृतिको यो मनोरम दृष्य के को हो थाहा छ ?
यो चन्द्रमा हो । तर सामान्यतया सँधै देखिने चन्द्रमा भने होइन । अठार बर्ष पछि देखिएको बिशेष ठुलो चन्द्रमा (सुपरमुन) हो । त्यही भएर जून १४ प्रतिशत ठूलो र ३० प्रतिशत उज्यालो थियो । यो चैत्र ५ गते राती देखिएको थियो । काठमाण्डौमा बिशेष जुन ५ बजेर ५७ मिनेट जाँदा उदाएको थियो । पुर्ण आकार यसले ११ बजेर ५५ मिनेटमा लिएको थियो । यसको अन्त्य ६ गते बिहान ५ बजेर २४ मिनेटमा भएको थियो ।
गुगलमा सुपरमुनको राम्रो तस्विर खोज्दा खोज्दै यो तस्विर भेटे । कसले खिच्यो कतै नाम उल्लेख थिएन । सोचेँ, कुनै प्रकृति पारखीले खिचेको हुनु पर्छ । उहाँलाई मेरो साधुवाद ।
साँच्चै बिछट्टै राम्रो होइन त यो चन्द्रमा ?
Filed under: मलाई मन परेको फोटो |	1 Comment »
सोचको परिधी कहाँसम्म ?
Posted on April 8, 2010 by नेपाली मुटु
मान्छेको सोचाइ के–के मा मात्र चल्दैन । अब केहि नपाएर मान्छेले एउटा कुखुरालाई नारेर खेत जोत्न
भनेर घरबाट निस्केला त ? अनि हलीले चाही घरबाट हिड्दा के भन्ला ? एक छिन है म अनुमान लगाउँछु, “ए बुढी ! भुटेको मकैको खाजा चाही लिएर नआइज है, फेरि कुखुराले खाईदिन्छ, म सक्दिन नि तानेर फेरि जोत्न ।” अथवा “ ए बुढी ! सानो नातीलाई मेरो खाजा बोकाएर ले अनि मैले दुई बोरा मकै छोडाएर ठिक्क पारेको छु । कसैलाई बोकाएर त्यो पनि खेतमा ले । खाजा भेटेन भने त कुखुरो जोत्दा–जोत्दै बस्छ नि फेरि ।”